Nhau - Chigadzirwa Kuunzwa kwePolypropylene (PP-R) Mapaipi eMvura Inotonhora uye Inotonhora
Chii chinonzi PP-R chubhu?
PP-R pombi inonziwo matatu-mhando polypropylene pombi. Inotora zvisina kujairika copolymer polypropylene kuti extruded mupombi, uye jekiseni-kuumbwa mupombi. Iyo mhando nyowani yepurasitiki pombi chigadzirwa chakagadzirwa uye chikaiswa muEurope mukutanga kwema1990. PP-R yakaonekwa mukunopera kwema80's, ichishandisa gasi chikamu copolymerization maitiro kuita ingangoita 5% PE muPP mamorekuru cheni zvisingaite uye zvakafanana yema polymerized (zvisina kujairika copolymerization) kuti ive chizvarwa chitsva chepombi zvigadzirwa. Iyo ine yakanaka yekukanganisa kuramba uye kwenguva refu-refu kukamba kuita.
Ndeapi maitiro ePP-R mapaipi? PP-R pombi ine anotevera makuru maficha:
1.non-chepfu uye utsanana. Iyo yakasvibirira mamorekuru ePP-R ingori kabhoni uye hydrogen. Iko hakuna zvinokuvadza uye zvine chepfu zvinhu. Izvo zvine hutsanana uye zvakavimbika. Izvo hazvishandiswe chete mumapombi anopisa uye anotonhora-emvura, asi zvakare anoshandiswa mune akachena masisitimu emvura yekunwa.
2.Kudzivirira kupisa uye kuchengetedza simba. Iko kupisa kwekushisa kwePP-R pombi iri 0.21w / mk, inova 1/200 chete yeiyo yesimbi pombi.
3.good kupisa kuramba. Iyo vicat softening poindi yePP-R chubhu iri 131.5 ° C. Iyo yakanyanya kushanda tembiricha inogona kusvika 95 ° C, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zveanopisa masisitimu emvura mukuvaka kupihwa kwemvura uye kudhirowa magadzirirwo.
4.Long upenyu basa. Hupenyu hwekushanda hwePP-R pombi hunogona kusvika makore anopfuura makumi mashanu pasi pekushanda tembiricha ye 70 ℃ uye kushanda kumanikidza (PN) 1.OMPa; Hupenyu hwebasa tembiricha yakajairwa (20 ℃) ​​inogona kusvika anopfuura makore zana.
5.Easy kuisirwa uye yakavimbika kubatana. PP-R ine yakanaka yekutenderera mashandiro. Zvipombi uye zvigadzirwa zvinogona kusunganidzwa nekupisa-kusungunuka uye kuwelda kwemagetsi, izvo zviri nyore kuisa uye zvakavimbika mumajoini. Simba rezvikamu zvakabatana rakakura kupfuura simba repombi pachayo.
6.Materials anogona zvishandiswezve. PP-R tsvina inocheneswa uye kupwanywa uye kushandiswazve kugadzirwa kwepombi uye pombi. Huwandu hwezvinhu zvakashandiswazve haupfuure gumi muzana yehuwandu hwese, izvo zvisingakanganise mhando yechigadzirwa.
Ndeapi makuru ekushandisa munda wePP-R mapaipi?
1.Ichi chivakwa chinotonhora uye chinopisa mvura masisitimu, kusanganisira epakati kudziyisa masisitimu;
2.Iyo yekudziya sisitimu muchivako, kusanganisira pasi, siding uye inopenya kupisa system;
3.Pure mvura yekushandisa system yekunwa yakananga;
4.Central (centralized) air-kutonhodza system;
5.Industrial pombi masisitimu ekutakura kana kuburitsa makemikari midhiya.